Wararka - Tayo aad u wanaagsan Shiinaha Jpt Mopa Midabka Fiber Laser Cutter Raycus Max Ipg 20W 30W 50W Birta Calaamadaynta Mashiinka Goynta
Tayo aad u wanaagsan Shiinaha Jpt Mopa Midabka Fiber Laser Cutter Raycus Max Ipg 20W 30W 50W Birta Calaamadaynta Mashiinka Goynta
Madbacadaha 3D Filament waa kuwo aad u fiican, laakiin inta badan waa xaddidan yihiin cabbirkooda. Madbacadaha laser sintering waxay bixiyaan sariiro daabacan oo waaweyn, laakiin sidoo kale waxay wataan qiimo dhan $ 250,000. Maxaan sameynaa mashiinka goynta galay daabacaha SLS 3D adiga kuu gaar ah.
Waxaan soo bandhignay OpenSLS marar badan oo hore, laakiin waxay u egtahay in ay ugu dambeyntii noqotay xal dhamaystiran (oo la isticmaali karo). Dhawaan ayaa la daabacay maqaal cilmi-baaris ah oo ku saabsan isha furan ee xulashada laser sintering (OpenSLS0 ee nylon iyo polycaprolactone biocompatible (PDF)), kaas oo faahfaahinaya. naqshadeynta iyo qaab-dhismeedka.
Kooxdu waxay samaysay qalab u rogi kara qalabka wax lagu gooyo ee leysarka cabbirkiisu yahay 60 cm x 90 cm oo u rogi kara daabacaha SLS. Quruxda
Faylasha naqshadeynta waxaa laga heli karaa GitHub. Qalabku wuxuu kuugu kici karaa qiyaastii $ 2,000, taas oo ah lawska marka loo eego daabacaadda laser-ka ganacsiga. Haddii aad ugu dambeyntii dhisto mid, fadlan nala soo socodsii!
Waa inaan gujiyaa mid ka mid ah isku xirka si aan u ogaado waxa ay ka hadlayaan. Waxaan weydiinayaa, waa maxay SLS marka hore? galay qaab dhismeedka 3D adag."
Waxaan rabaa in aan ogaado haddii ay suurtogal tahay in la isticmaalo birta birta ah ee dhalaalka hoose. Waan ogahay in qalabka waaweyn ee SLS ee ganacsiga ay isticmaali karaan aluminium ama xitaa birta, laakiin barta dhalaalka ee biraha cadcad ee qaar ka mid ah waa inay ku dhex jiraan mashiinnada goynta laysarka.
Si kastaba ha ahaatee, birtu guud ahaan way ka dhalaal badan tahay oo kulaylkeedu way ka badan tahay balaastiigga, sidaa awgeed inkasta oo aan filayo inay shaqaynayso, waxa laga yaabaa inay fududaato in si toos ah kulaylka loo mariyo, sida robot alxanka 3D oo uu sheegay hackaday sannadkii hore http://hackaday.com/ 2015/06/13/6- dhidibka-robot-gacan-3d-ku daabacaa-biriish-bireed/
Waa hagaag, qaar ka mid ah qaybaha warshadaha ayaa isticmaala sintering laser sidan oo kale ah, sidaas darteed waa la samayn karaa. Tilmaanta milicsiga ee biraha badan ee budada ah waxay la mid yihiin tusaha milicsiga balaastigga budada ah. Intaa waxaa dheer, waxaa jira waxyaabo badan oo zinc ah oo leh MP macquul ah oo macquul ah. Waa in ay ahaataa inta u dhaxaysa mashiinnada goynta laysarka. Su'aasha dhabta ah waa, waxaan u maleynayaa, in alaabooyinkani ay yihiin qalab wax soo saar oo faa'iido leh.
Dhamaadka hore ee qalabka warshadaha sida caadiga ah waxay leeyihiin muraayadaha polarizing si ay u nuugaan ama u leexiyaan iftiinka iftiinka ka soo baxa isha laysarka. Waqtigan xaadirka ah, xaaladani kuma jirto CO2 lasers. Intaa waxaa dheer, haddii aysan jirin buuxin argon oo wanaagsan ama faaruq ah oo ku jira xayndaabka. , Biraha badankoodu waxay kaliya oxidize (ama gubi doonaan) .Kakanaanta iyo kharashka wax-qabadka birta ayaa si degdeg ah u kordhaya.
Waxa aad qortay waa run, waana sababta aan u tixgeliyey isticmaalka birta qasacadaysan ama daawaynta birta ah ee lagu heli karo heerkul macquul ah.
Waxaan isku dayi doonaa in aan isku dayo brazing alloys. Waxaan u maleynayaa inay ku siin doonaan natiijooyinka ugu fiican fursada ugu yar ee sunta birta ah.
Sawirka OLD_HACK waa mid mudan in la xuso: waa laser buluug ah.Birta qaawan, nuugista nuugista ayaa ka waxtar badnaan doonta laser CO2. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in beam aad u yar uu dib ugu soo laabanayo leysarka sidaas darteedna aan xasilloonayn.
Xaaladdan oo kale, mawjada dhererka ma aha arrin. Isbeddelka sifooyinka nuugista ee biraha ee xajmiga dhererka ee 400nm ilaa 10um kuma filna inay door ka ciyaaraan halkan. Tilmaamaha muhiimka ah ee muhiimka ah waa muraayadda sababtoo ah dusha sare iyo tayada. oo leh dusha aan joogto ahayn, oogada siman waxay ka tarjumaysaa iftiin badan oo dib ugu soo noqonaya dusha sare.
Laysarada diode waxay aad ugu nugul yihiin milicsiga dhabarka
Laysarka gaaska (sida CO2 lasers-ka halkan ku lug leh) ma waxyeelayn doono dib u milicsiga.Dhab ahaantii, farsamadan waxaa loo isticmaali karaa in si ula kac ah loo sameeyo Q-beddelka si loo gaaro awoodda ugu sarreysa garaaca wadnaha.
Waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho Nd: YAG lasers, ytterbium fiber lasers ama lasers la mid ah, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo in lagu gooyo biraha halkii la isticmaali lahaa lasers CO2. Kuwan hoose ~ 50W heerarka awoodda, laser 10um ee laser CO2 ayaa si fiican u nuugay alaabta organic ( sida balaastiig), laakiin wax saameyn ah kuma yeelan doonto birta.
Waa maxay cabbirka qayb ka mid ah walxaha balaastigga ah ee bilawga ah? Waxaan rajeyneynaa in ay aad u weyn tahay oo aan ku faafi karin hawada, sababtoo ah haddii qaybo caag ah ay galaan hawada oo ay ku dhegaan muraayaddaada, muraayadda, iyo qalabka wax soo saarka, waxaad dhowaan yeelan doontaa maalin xun. .
Si loo yareeyo xaaladdan, indho-indheynta waa in gebi ahaanba laga go'doomiyo "goobta shaqada" si looga hortago in budada caaga ah ay soo gasho.
Hi, kaliya inaan kuu sheego waa war wanaagsan!!Shirkada aan u shaqeeyo, waxaanu soo saareynaa oo soo saareynaa budada SLS PA12, PA11, TPU, iyo polycaprolactone iyo waxes ee sls. Runtii waxaan filayaa in tani ay tahay farsamada mustaqbalka!! Hadii aad u baahan tahay agabka sls ee gaarka ah, fadlan xor ayaad u tahay inaad ila soo xidhiidho!marga.bardeci@advanc3dmaterials.com
Waxaan u maleynayaa in kala-goysyada laysarka ay noqon doonaan kuwo qabow- warqad looma baahna! Ma bixin kartaa agab?
Hagaag, kuuma siin karo. Tani Tani waxay fikrad fiican u noqon kartaa Nederlaan Laakiin waxaan ogahay in dadka qaarkiis ay sameeyeen warqad sinteed, iyo sidoo kale sokor la shiiday iyo nesquick.
Adigoo isticmaalaya mareegahayaga iyo adeegyadayada, waxaad si cad u ogolaatay meelaynta waxqabadkayaga, shaqayntayada iyo cookies-ka xayaysiinta. Wax badan baro
Waqtiga boostada: Dec-27-2021
Alxanka dahabka, Mashiinka Cnc Laser, Laser Cnc Machine Iibka, Kaarboon Fiber Laser Cutter, Alxanka Tooska ah ee Laser, Gooyaha Laser-ka ee xaashida,